Maalinta: Sebtember 8, 2019
Jadwalka Baska SAMULAŞ Ayaa Bilaabmaya Jadwalka Jiilaalka
SAMULAŞ ee Samsun waxay ku dhawaaqday in dhamaadka xagaaga iyo bilowga sanad dugsiyeedka cusub, Jadwalka Jiilaalka Jiilaalka ayaa lagu dabaqi doonaa Ekspres, Ring iyo Terminal Baska Isniinta. [More ...]
4 400 kiiloomitir saacaddiiba lacag kala duwan ee basaska korontada guriga ugu horeysay Turkey ee SILEO. Bozankaya bay'ad saaxiibtinimo, deggan, wax ku ool ah iyo uumi-baxa eber [More ...]
Dowladda Hoose ee Manisa, 9 2019-2020, oo bilaaban doonta Isniinta, waxay qaaday tillaabooyin ku saabsan garoonka gaadiidka muddada waxbarashada iyo tababarka. Bayaan ay soo saartay Waaxda Gaadiidka ee ku saabsan mawduuca, hamiga guusha ayaa la gaarsiiyay dhammaan ardayda. [More ...]
Dhageysiga labaad ee kiiska 'tababbarka tareenka Çorlu' waxaa lagu qaban doonaa Educationorlu Xarunta Waxbarashada Dadweynaha bisha Sebtember. Sida ku xusan go’aanka maxkamadda ka hor, cabasho kasta waxaa matali doona ugu badnaan qareennada 10. Iyaga ayaa rafcaan ka qaadan doona go'aanka [More ...]
Xerada 3 ee Storey Big Istanbul Tunnel waxaa lagu dhisi doonaa qaab-ku-wareejin moodel. Aaway jidadkii hore ee tareenka 3 dabaqa hore? 3 Storey Big Waa maxay mashruuca tunnel Istanbul? [More ...]
Maanta taariikhda: 8 September 1932 Shimendifer School
Maanta Taariikhda 8 September 1932 Dugsi Dugsi-xidhid ayaa la xidhay. 8 September 2017 Tepekoy-Selcuk IZBAN Line ayaa la furay ka qaybgalka ra'iisul wasaaraha Binali Yildirim iyo wasiirka gaadiidka, arrimaha badda iyo xiriirka Ahmet Arslan